Taliyaha ciidanka xooga “Waan wada xisaabtamaynaa runta markaan idin sheego” – Radio Muqdisho
Taliyaha ciidanka xooga “Waan wada xisaabtamaynaa runta markaan idin sheego”
Kulanka todobaadlaha ahaa oo ay maanta ku yeesheen saraakiisha ciidanka xooga dalka ayaa waxaa looga hadlayay daryeelka askarta ciidanka, waxaana ka qeybgalay taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed sareeyo gaas Maxamed Aadan Axmed iyo madaxda hogaanada ciidanka xooga kaas oo maanta lagu qabtay xarunta taliska ciidanka xooga dalka ee magaalada Muqdisho.
Kooxda Horseed ee ciidanka xooga, ayaa goobta ku soo bandhigay suugaan ka turjamaysay ahmiyadda ciidanka isla markaana dhiirigelin u aheyd dhamaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya.
Taliyaha ciidanka xooga dalka, oo kulanka hadal ka jeediyay ayaa sheegay in kulankan maanta oo ayaga gaar u ahaa, isagoo askarta ciidanka xooga dalka ku booriyay in ay su hufan u gutaan waajibkooda aysana saameyn ku yeelanin duruufaha adag ee haatan dalka ka jira.
Sareeyo gaas, Maxamed Aadan Axmed taliyaha ciidanka xooga dalka, ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in saraakiisha xooga looga baahan yahay in ay howshooda ka soo dhalaalaan isla markaana lala xisaabtami doono cidii shaqada qaranka u egmaday ka soo bixi weyday.
Kulanka todobaadlaha ah oo ay isugu yimaadaan saraakiisha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa beri samaadkii ahaa mid maalin kasta oo Khamiis ah ka dhici jirey Shiirkole ofishaale oo ahaa guriyihii saraakiisha ciidanka xooga dalka, hase yeeshee waxaa hadda ku guuleystay in uu dib u soo nooleeyo sareeyo gaas Maxamed Aadan Axmed taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Ku-xigeenka Jubaland oo ka qeyb galay Dabaaldaga Dhaqanka iyo Farshaxanka ee Kismayo “SAWIRRO”
Maamulka deegaanka Ceeldibir oo ka hadlay xaalada deegaanka